Annaga nagu saabsan - Huizhou Virex Technology Co., Ltd.
La aasaasay 2013, huizhou virex technology co., Ltd. waxay diiradda saartaa beerta gudaha iyo qalabka hydroponics. Kaas oo hogaaminaya dhoofiyaha Shiinaha iyo alaab-qeybiyaha dahabiga ah ee la xaqiijiyay ee alibaba, alaabadayada ugu muhiimsan waa teendho koraan, caleen gooya, iftiin koraan, bac koraan. Kori xirmo fudud iyo wax ka badan-wax walba oo aad u baahan tahay si aad u dhisto beero dhammaystiran iyo alaabada hydroponic.
alaabtayada waxaa loo dhoofiyaa in ka badan 20 waddan oo ay ku jiraan: America, Canada, England, Germany, France iyo Japan, oo sumcad wanaagsan ku leh suuqa .VIREX waxay leedahay awood horumarineed oo cusub oo xoog leh, qalabkii ugu dambeeyay ee farsamada iyo hababka wax soo saarka. Oo waxaan ku leenahay koox khibrad leh oo khibrad leh oo R&D ah, si aan u bixin karno adeegyada OEM/ODM macaamiisheena. VIREX had iyo jeer waxay u hoggaansantaa "tayada alaabta, keenista wakhtiga iyo adeegga wanaagsan" falsafada ganacsiga. Si kor loogu qaado habka maareynta ganacsiga, oo si tartiib tartiib ah loo hagaajiyo nidaamka maamulka, si loo siiyo macaamiisha alaab "ammaan, la isku halleyn karo, tayo sare leh". Xulashadayada tayada ugu fiican ee sahayda beerta gudaha iyo qalabka hydroponic waxay ku saleysan tahay alaabooyinka bixiya waxtarka, waxqabadka iyo qiimaha.
Tayadu waa Dhaqankeena
Tayada alaabta, keenista wakhtiga iyo adeega wanaagsan
Si kastaba ha ahaatee nooca beerta gudaha ee aad sameyso, waxaad ka heli kartaa qalab iyo sahay VIREX. Si loo bixiyo badeecadaha iyo adeegyada ugu wanaagsan, waxaan la hadalnaa macaamiisheena maalin kasta si aan dib ugu eegno agabkayada hadda jira si aan u aragno haddii aan ku dari karno noocyo cusub iyo qalab si aan u daboolno baahiyaha macaamiisheena. Kooxdayadu had iyo jeer waxay ku jiraan gacanta si ay u daboolaan baahiyahaaga sii kordhaya, shaqaalaheennu waxay leeyihiin khibrad koritaan oo dhab ah waxayna ku jiraan hadaf si ay kaaga caawiyaan inaad ku guulaysato.Our si taxadar leh loo doortay waxaan ognahay inay yihiin kuwo waxtar leh oo la isku halayn karo - tani waxay la macno tahay inaad hubiso in marka wax aad nagala soo iibsatid waxa kaliya ee aad ka iibsanaysaa alaab tayo leh
Warshada Teendhadayada Koritaanka
Warshadayada caleen gooya